Shirkii uu ku baaqay Farmaajo oo fashil ku dhow iyo shir kale o furmaya - Awdinle Online
Shirkii uu ku baaqay Farmaajo oo fashil ku dhow iyo shir kale o furmaya
Dhawaan Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa uu ku baaqay shir looga hadlayo khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya oo lagu qabanayo 15-ka bishaan magaalada Garowe, hayeeshee aan ilaa iyo hadda la isku raacin halkii shirkaas muhiimka ah lagu qaban lahaa maadama Puntland iyaduna ay ku baaqday in shirku uu ka dhaco Muqdisho.
Maalinta Berito oo Isniin ah ayaa loo asteeyay qabsoomida shirka, balse uusan muuqan ififaalo uu shirkaasi ku furmayo maadaama weli aan sirasmi ah la isugu raacin halka uu ka dhacayo.
Shalay Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay waxaa gaaray 14 Xubnood oo ah Guddi laga soo kala xulay Dowladda Federaalka, dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kuwaas oo maanta halkaasi shir ku yeelanaya.
Xubnaha Gudiga ayaa shirkooda waxaa ay uga hadlayaan sida uu u dhici lahaa shirka madasha wadatashiga Madaxda dowladda, ajandayaasha looga hadlayo iyo goobta rasmiga ah oo lagu qabanayo, in kastoo weli dowladda Soomaaliya ay ku adkeysaneyso in lagu qabanayo Magaalada Garoowe.
Shirka uu dhawaan ku dhawaaqay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda mid aan ku qabsoomi doonin waqtigii loogu talo galay, waxaana Warbixin laga sugayaa Guddiga shirka ku yeelanaya Magalada Baydhabo.
Shalay qoraal kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in aysan aaminsaneyn in su’aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo ay cudurdaar u noqoto dib-u-dhac kasta ee ku yimaada shir-madexeedkan muhiimka ah.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Gacanta ku dhigtay gaari qarax loo soo waday Muqdisho
Next articleDowladda oo dhagxaan ku xirtay Isgoys ku yaal Muqdisho